GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Austrian Sign Language Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Cuban Sign Language Czech Danish Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Galician Georgian German German Sign Language Greek Guarani Guatemalan Sign Language Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maya Mexican Sign Language Myanmar Navajo Nepali Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Quebec Sign Language Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Taiwanese Sign Language Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Vietnamese Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zulu
8 Jehova wee sị Jọshụa: “Atụla egwu, atụkwala ụjọ.+ Kpọrọ ndị agha niile bilie, gbagoo E-aị. Lee, enyefewo m eze E-aị na ndị ya na obodo ya na ala ya n’aka gị.+ 2 Meekwa E-aị na eze ya dị nnọọ ka i mere Jeriko na eze ya.+ Ọ bụ naanị na unu ga-ebukọrọ ihe unu ga-akwata n’ime ya na anụ ụlọ ya.+ Mee ka ndị agha gị ụfọdụ zoo n’azụ obodo ahụ.”+ 3 Jọshụa na ndị agha niile+ wee bilie gbagoo E-aị, Jọshụa wee họrọ puku ndị ikom iri atọ, ndị dimkpa bụ́ dike,+ wee zipụ ha n’abalị. 4 O wee nye ha iwu, sị: “Lee, unu ga-ezo+ n’azụ obodo ahụ. Unu agala ebe dị nnọọ anya n’obodo ahụ, unu niile ga-adịkwa njikere. 5 Mụ na ndị niile mụ na ha so ga-aga obodo ahụ nso. Ọ ga-erukwa na, ọ bụrụ na ha apụta ịbịa buso anyị agha dị ka ha mere na mbụ,+ anyị ga-agbara ha ọsọ. 6 Ha ga-achụrụkwa anyị pụta ruo mgbe anyị rapụtara ha n’obodo ahụ, n’ihi na ha ga-asị, ‘Ha na-agbara anyị ọsọ dị ka ha mere na mbụ.’+ Anyị ga-agbara ha ọsọ. 7 Mgbe ahụ, unu ga-esi n’ebe unu zoro bilie, unu ga-ewegharakwa obodo ahụ; Jehova bụ́ Chineke unu ga-enyefekwa ya n’aka unu.+ 8 Ọ ga-erukwa na ozugbo unu weghaara obodo ahụ, unu ga-esunye obodo ahụ ọkụ.+ Unu ga-eme dị nnọọ ka okwu Jehova si dị. Lee, enyewo m unu iwu.”+ 9 Jọshụa wee zipụ ha, ha wee gaa n’ebe ha ga-ezo, maakwa ụlọikwuu n’agbata Betel na E-aị n’ebe ọdịda anyanwụ E-aị, ma Jọshụa rahụrụ n’etiti ndị agha nke ya. 10 Jọshụa wee bilie n’isi ụtụtụ+ ma nyochaa ndị agha nke ya, ya na ndị okenye Izrel wee duru ndị agha ahụ gbagoo E-aị. 11 Ndị agha niile+ ya na ha so gbagokwara, ka ha wee jeruo n’ihu obodo ahụ, ha wee maa ụlọikwuu n’ebe ugwu E-aị, ndagwurugwu adịrịkwa n’agbata ha na E-aị. 12 Ka ọ dị ugbu a, ọ kpọọrọ ihe dị ka puku ndị ikom ise wee mee ka ha zoo+ n’agbata Betel+ na E-aị, n’ebe ọdịda anyanwụ obodo ahụ. 13 Ndị agha ahụ wee mee ka ndị agha ka n’ọnụ ọgụgụ nọrọ n’ebe ugwu obodo ahụ,+ meekwa ka ndị ọzọ zoo n’ebe ọdịda anyanwụ obodo ahụ,+ Jọshụa wee banye n’etiti ndagwurugwu ahụ n’abalị ahụ. 14 O wee ruo na ngwa ngwa eze E-aị hụrụ ya, ya na ndị ya niile, bụ́ ndị ikom obodo ya, mere ọsọ ọsọ bilie n’isi ụtụtụ gaa ibuso Izrel agha, n’oge a kara aka, n’ihu mbara ọzara. Ma ọ maghị na e nwere ndị zoro n’azụ obodo ahụ.+ 15 Mgbe Jọshụa na Izrel dum mere ka à ga-asị na e meriwo ha,+ ha si n’ụzọ ala ịkpa gbaa ọsọ.+ 16 E wee kpọpụta ndị niile nọ n’obodo ahụ ka ha chụwa ha, ha wee chụwa Jọshụa, e wee rapụta ha n’obodo ha.+ 17 Ọ dịghịkwa nwoke ọ bụla fọdụrụ n’ime E-aị nakwa Betel nke na-achụrụghị Izrel gawa, nke mere na ha ghewere ọnụ ụzọ ámá obodo ahụ oghe wee chụwa Izrel. 18 Jehova wee sị Jọshụa: “Setịa árọ̀ ahụ i ji n’aka n’ebe chere E-aị ihu,+ n’ihi na n’aka gị ka m ga-enyefe ya.”+ Jọshụa wee setịa árọ̀ ahụ o ji n’aka n’ebe chere obodo ahụ ihu. 19 Ndị agha ahụ zoro ezo wee si n’ebe ha nọ bilie ngwa ngwa, ha wee malite ịgba ọsọ ozugbo o setịrị aka ya, ha wee banye n’obodo ahụ ma weghara ya.+ Ha wee mee ngwa ngwa sunye obodo ahụ ọkụ.+ 20 Ndị E-aị wee tụgharịa lee anya n’azụ, ma, lee, anwụrụ ọkụ obodo ha nọ na-akwụgo eluigwe, ike adịghịkwa ha ịgbaga ebe ọ bụla. Ndị agha ahụ bụ́ ndị gbaara gawa n’ala ịkpa wee tụgharịa buso ndị ahụ na-achụ ha agha. 21 Jọshụa na Izrel dum wee hụ na ndị agha ahụ zoro ezo+ ewegharawo obodo ahụ, nakwa na anwụrụ ọkụ obodo ahụ na-akwụli elu, ha wee tụgharịa malite igbu ndị E-aị. 22 Ndị nke ọzọ wee si n’obodo ahụ pụta ibuso ha agha, nke mere ka ha nọrọ Izrel n’etiti, ndị nke a nọ n’otu akụkụ, ndị nke ọzọ anọrọ n’akụkụ nke ọzọ, ha wee gbuo ha ruo mgbe ọ na-adịghị onye fọdụrụ n’ime ha ma ọ bụ onye gbalagara agbalaga.+ 23 Ha jidekwara eze E-aị+ ná ndụ wee kpụrụ ya bịakwute Jọshụa. 24 O wee ruo na, ka Izrel nọ na-egbuchapụ ndị niile bi n’obodo E-aị bụ́ ndị nọ n’ọhịa, n’ala ịkpa ebe ha chụbara ha, ha ji ihu mma agha na-egbu ha, ha niile, ruo mgbe ha nwụchara. E mesịa, Izrel dum laghachiri E-aị wee jiri ihu mma agha bibie ya. 25 Ndị niile nwụrụ n’ụbọchị ahụ, ma nwoke ma nwaanyị, dị puku mmadụ iri na abụọ, ndị E-aị niile. 26 Jọshụa eweghachighịkwa aka ahụ o ji setịa árọ̀+ ahụ ruo mgbe o gbuchara+ ndị niile bi n’obodo E-aị. 27 Ọ bụ naanị anụ ụlọ na ihe ha kwatara n’obodo ahụ ka Izrel bukọọrọ, dị ka okwu Jehova nyere Jọshụa n’iwu si dị.+ 28 Jọshụa wee gbaa E-aị ọkụ ma mee ka ọ bụrụ mkpọmkpọ ebe+ nke ga-adịru mgbe ebighị ebi, dị ka ihe tọgbọrọ n’efu ruo taa. 29 O wee kwụwa eze E-aị+ n’elu osisi ruo ná mgbede;+ mgbe anyanwụ na-achọ ịda, Jọshụa nyere iwu, ha wee butuo ozu+ ya n’osisi ahụ wee busa ya n’ọnụ ụzọ ámá obodo ahụ ma tụkọta nkume dị ukwuu n’elu ya, ruo taa. 30 Ọ bụ mgbe ahụ ka Jọshụa wuuru Jehova bụ́ Chineke Izrel ebe ịchụàjà,+ n’Ugwu Ibal,+ 31 dị nnọọ ka Mozis bụ́ ohu Jehova nyere ụmụ Izrel n’iwu, dị ka e dere ya n’akwụkwọ iwu+ Mozis, sị: “Ebe ịchụàjà e ji nkume a na-awaghị awa wuo, nke a na-emetụghị ngwá ọrụ e ji ígwè kpụọ”;+ ha wee chụọrọ Jehova àjà nsure ọkụ na àjà udo n’elu ya.+ 32 O wee depụta n’elu nkume+ ahụ iwu Mozis nke o deworo n’ihu ụmụ Izrel.+ 33 Izrel dum na ndị okenye+ ha na ndị isi na ndị ikpe ha guzo n’akụkụ abụọ nke Igbe ahụ, n’ihu ndị nchụàjà,+ bụ́ ndị Livaị, ndị bu igbe ọgbụgba ndụ Jehova,+ tinyere ndị mbịarambịa na ụmụ afọ,+ otu ọkara n’ime ha guzo n’ihu Ugwu Gerizim,+ ọkara nke ọzọ eguzoro n’ihu Ugwu Ibal,+ (dị nnọọ ka Mozis ohu Jehova nyere n’iwu,)+ ibugodị ụzọ gọzie+ ndị Izrel. 34 E mesịa, ọ gụpụtara iwu ahụ dum+ n’olu dara ụda, ngọzi+ na nkọcha,+ dị ka ihe niile e dere n’akwụkwọ iwu ahụ si dị. 35 Ọ dịghị okwu ọ bụla dị n’ihe niile Mozis nyere n’iwu nke Jọshụa na-agụpụtaghị n’olu dara ụda n’ihu ọgbakọ Izrel dum,+ tinyere ndị inyom+ na ụmụntakịrị+ na ndị mbịarambịa+ ndị bi n’etiti ha.